प्रधानमन्त्रीले भने- जति लड्नु छ हामी लड्छौं, नयाँ पुस्ता भाग्यमानी हुन्छ (शुभकामना मन्तव्यसहित) – Health Post Nepal
२०७७ असार १ गते ११:४७
आजबाट वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको अवरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको शुभकामना दिएका छन्।
शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हामीले प्रदान गर्ने शिक्षा प्रणालिले अबका विद्यार्थीहरू विश्वसँग प्रतिष्पर्धा नर्गे खालका हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘उनीहरू सिकाईमा अब्बल, जिज्ञासु र आम विषयमा जानकार हुनुपर्छ। आफ्नो देशमा अविकास, पछौटेपन र गरिबी के कारणले भएको रहेछ। त्यसलाई केलाउने, बुझ्ने र त्यो समस्या अन्त्यका लागि आफू के हुने भन्ने बारे निश्च हुनुपर्छ’, उनले भने।
उनले अहिले आफूले जिज्ञासु युवाहरूबाट मुलुक विग्रदै पो छ कि? मेरो देशको सरकार कर्तव्यबाट चुक्दै पो छ कि? भन्ने जस्ता कुरा सुनिरहेको बताए।
उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुँदैन। जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ र मुलुक बन्छ। अबका पुस्ता यो मुलुकका भाग्यमानी पुस्ता हुनेछन्। यो मुलुकमा अब अर्को आन्दोलन आवश्यक छैन।’
एसईईको विकल्पमा जान र प्रविधिको प्रयोग गर्न अहिलेको परिस्थितिले उत्प्ररेरित गरेकाले त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए।
उनले सफलताको रहस्य इमान्दारिता भएकाकाले नयाँ पुस्ता इमान्दार हुनुपर्ने बताए। इमान्दार बन्दै यही पुस्ता समृद्धिको तला थप्न जिम्मेबार हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुभकामना मन्तव्य
– भाइरसको महामारी रोकिएको छैन, अझै फैलिँदो छ । लकडाउन अन्त्य भएको होइन, केही खुकुलो पारिएको छ । तसर्थ हाम्रो व्यवहार, स्वच्छन्द होइन सतर्कता सहित चालिनु पर्छ। तोकिएका सबै नियमहरु पालना गरिनु पर्छ । सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, आवश्यक सुरक्षा सतर्कता नपनाउने र मनखुशी चल्ने गरेमा आप्mना कारणले आपूm मात्रै होइन, सिङ्गो परिवार, आफन्तहरु र समग्र समुदाय नै संक्रमित हुन सक्छन् । हाम्रा स–साना नानीहरुको सिकाइको थलो नै समुदायमा संक्रमण फैलने केन्द्र नबनोस् भन्नेमा विशेषगरी शिक्षक, स्वयंसेवक र अभिभावक लगायत सबै सचेत हुनै पर्छ ।